> Resource > Video > Top 5 Best Free MPEG Video Splitters
Dalabka koraya ee iswada software video qaybsama bixisaa users kala duwan oo dhowr ah si aad ugu isticmaasho feature loo baahan yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxtarka helo oo ka mid ah sifooyinka laga heli karaa waa hawl labaad oo ah inay sameeyaan, tallaabada ugu horreysa ee ugu muhiimsan ee ay tahay in ay doortaan software video qaybsama ugu fiican. Ujeedada isticmaalaya splitter video yahay in cad ama video ka yeela Goosimo; waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro outlooks gaar ah iyo geliyaan in ay internet-ka; files qaybsama sidoo kale waxaa dib loo ciyaari karo. Si kastaba ha ahaatee, hawsha waxaa loo samayn karaa iyada oo qalab badan oo video fiicnin laakiin ujeedka user waa in ay baadhaan ugu wanaagsan; waayo, sababtan aawadeed, liiska ugu sareeya 5 free video MPEG splitters ka yar tahay dood:
Tani software video fiicnin waa qalab cajiib ah loo isticmaalo si ay u dhinto noocyada kala duwan ee videos, oo ay ku jiraan MOV, MPEG-1, MPEG-2, WMN, AVI, MKV, MP3 iyo in ka badan. Waa u fududahay in la isticmaalo iyo tayada hayaa video asalka. Dhanka kale, waxa uu siiyaa fursado wax soo saarka kala duwan iyadoo la raacayo filayo isticmaala.
Ujeedada ugu weyn ee software waa in la sameeyo qaybo ama qeybaha kala duwan ee faylka video weyn kuwa yaryar; waa codsiyada si xor ah loo isticmaalo in aan kala tagno faylasha. The videos in aan noqon karo taam galay DVD iyo CD oo u baahan in la gubo, waa la jaray ama kala qaybin isticmaalaya fudud video splitter. Waxa ay taageertaa badan oo qaabab video labadaba iyo wixii soo baxayey. Waxa ugu fiican oo ku saabsan qalab tani waa in aysan u baahan tahay wax macluumaad ah oo ka user ah, waxa uu u malaynayay in ay doortaan sida ugu kaas oo uu doonayo in ay u kala video ah, hawlaha kale waxaa si toos ah ay sameeyeen barnaamijka software-ka.
Khafiif, la qaadan karo oo la jaan qaada;
Haysaa tayada wanaagsan ee file debeda;
Haya processing Dufcaddii.
Qiimaha shuruudaha nidaamka iyo khayraadka.
Users ayaa door bidaan in ay isticmaalaan VidSplitter sababta oo ah isku halaynta iyo cimri dherer; waxaa loo isticmaalaa in lagu badalo files MPEG badan oo yeela Goosimo iyadoo la isticmaalayo dhowr qaabab kala duwan. The files waaweyn oo ah qaabab video sida MPEG, AVI, ASF iyo wmv waxaa si fudud la gooyaa oo soo ururay galay qaabab badan oo xawaare degdeg ah. Intaas waxaa sii dheer, VidSplitter users ah u saamaxaaya in ay badbaadin file ka baaraandegi warbaahinta kaydinta.
Jajabo oo badasha clips ka xawaare degdeg ah;
Diiradda saarayaa Customization.
File Help aan la heli karin;
Istaraatijiyad doorashada Time-ku salaysan aan loo taageeray.
Taageeridda qaabab kala duwan video sida AVI, DVD socon MPEG files, MP4 iyo ASF, Avidemux caawisaa dadka isticmaala ku kala jabeen videos ee si Goosimo yar. Hawlaha la iswada karaa iyadoo la isticmaalayo mashaariicda, safka shaqada iyo awoodaha scripting awood badan.
Waxa laga heli karaa dhufto ee kala duwan: Windows, Mac iyo Linux.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada software keentay video tafatirka u MPEG video files. Waxa kale oo ay taageertaa kala duwan oo kale qaabab video sida VOB, PS, M2P, mod, VRO, DAT, MOV. Waxay awood u isticmaala in ay u kala faylasha video weyn wax yar oo clips video kaliya dhowr ilbiriqsi.
Taageerada tiro balaadhan oo ah qaabab video,
Hawlaha video tafatirka kala duwan.
Wondershare Filmora waa aalad video tafatir dheeraad ah oo horumarsan kaas oo awood kuu kala, darsamaan, dalagga iyo isku shaandheyn iyo sidoo kale ku daray saamaynta video kala duwan. Kani waa barnaamij oo balan qaaday in qiimihiisu yahay isku dayaya.
Sida loo Beddelaan AVI in MPEG-2